Baarlamaanka oo maanta ka doodaya Miisaaniyada Dowladda | Universal Somali TV
Baarlamaanka oo maanta ka doodaya Miisaaniyada Dowladda
July 15 2017 09:59:37
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa kulankoodii ugu dambeeyay Wasiirka maaliyadda hor geeyay qorshooyin dib u eegis lagu sameynaayo miisaaniyadda Dowladda oo horay loo ansixiyey.
Mudanayaasha Baarlamaanka ayaa Arbacadii dalbaday in la mariyo qorshahaan sida dastuurka waafaqsan oo la siiyo muddo 48-saac, kadibna ay ka doodaan miisaaniyadda dib u eegista lagu sameynaayo.
Mahad Cabdalla Cawad oo kulankii ugu dambeeyey ee Baarlamaanka shir gudoominayey ayaa sheegay in sida xeer hoosaadka Baarlamaanka uu qabo in uu marka hore maro qaybta mudanayaasha si ay usoo aqriyaan, kadibna wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ay hor tagto si wasiirku uu u aqriyo dib u aqrinta la xiriira dib u eegista miisaaniyadda Dowladda ee 2017-ka.
Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya ayaa wasaaradda maaliyadda Somaliya ku dhaliilay in ay dooneysay in ay si deg deg ah xildhibaanada ay kaga hesho cod ku aadan dib u aqrinta miisaaniyadda Dowladda, inkastoo Xildhibaanada kolkii dambe ay dalbadeen in lasiiyo warqadaha uu wasiirka maaliyadda la hortagayo baarlamaanka si ay usoo aqriyaan ka hor guda galka.
Baarlamaanka Somaliya ayaa maanta ka doodayo dib u eegista in dib loo aqriyo miisaaniyadda Dowladda, ajandahaan ayaa ka mid ah qodobo horyaal fadhiga Xildhibaanada Baarlamaanka oo 8-dii bishaan u furmay kalfadhiga 2-aad.
Kan-xigaMaamulka Sh.dhexe oo xaliyay colaad b...
Kan-horeMadaxweynaha Hirshabelle oo sheegay T...
34,163,258 unique visits